“Mirgaa fi bilisummaa keenya amma argannutti garboonfatoota irratti ni qabsoofna, dadhabnu ilmaan itti guddifanna” Gen. waaqoo Guutu – “dhimmi Oromoo kana booda nafxanyootati bofa udduu lixxe taatee jirti. Harkisan itti cita, dhiisan itti lixa” hoogganaa Meccaa fi Tuulamaa. | Dhaamsa Ogeettii
“Mirgaa fi bilisummaa keenya amma argannutti garboonfatoota irratti ni qabsoofna, dadhabnu ilmaan itti guddifanna” Gen. waaqoo Guutu – “dhimmi Oromoo kana booda nafxanyootati bofa udduu lixxe taatee jirti. Harkisan itti cita, dhiisan itti lixa” hoogganaa Meccaa fi Tuulamaa.
Posted: Caamsaa/May 6, 2014 ·
Keessumaa yeroo ammaa dhaabbileen siyaasaa Oromoo guddaa xinnaa otoo hin jedhiin tokkummaan dhaabbachuu qabu. wal dhibdee ykn garaa garummaa xixiqaaf jecha, diina Oromootiif yeroo kennuu hin qaban. Dhiigdi barattoota Oromoo, dhaabbilee siyaasa Oromoo yeroo kamuu caala, akka waliin hojataniif imaanaa itti ta’uu qaba. xuurii dhiigaan ilmaan Oromoo dhaamte kana dhaabbileen siyaasaa dhaabbatanii ilaaluu qabu. gumaan barattoota Oromoo kan baafamu tokkummaa ilmaan Oromoo dhugoomsuun ta’uu qaba. biyya keessatti ilmaan Oromoo yeroo kamuu caala, waliin dhaabatanii jiru. Dhiigaan muldhisanii jiru. Dhaabbileen siyaasaa biyya keessa jiranis ta’ee, biyya alaa socho’an gaaffiin bilbiltuu tokkummaa ta’uu isaa hubatanii atatamaan waliin hojachuu qabu. hoogganii dhaabaa ykn garee kamuu dhimma tokkummaa Oromoof gurra hin kennine diina gargaaruun ala Oromoof bu’aa tokko illee hin qabaatu. Kanaaf dhiigdi barattoota Oromoo TPLF fi miindeffamtoota isaan dhangala’e, nutokkoomsuu qaba. ajandaa ummata oromomoo fi Oromiyaan ala gaaffiin bilbiltuun hin jiraatu.
“KARAA CABE HAA DHANGALA’U!” || “SHIROOTAA FI IMPAAYEERA HIWAATOOTAA IJAARUU” 06.05.14
IYYAA, IYYA DABARSAA || BIYYALAATTIS NU QOCHISIIFACHUU FEDHUU? 06.05.14